Diplomasia: Hitodika amin'ny fifandraisana ara-barotra sy fikarohana teknolojia
Ho an'ny tetikasa "Vitatsika io", dia mipetraka voalohany ny Fahaleovantenam-pirenena sy ny Fiandrihanam-pirenena.
Apetraka arak'izany ny fitovian-danja eo amin'ny fifandraisan'ny Firenena roa samihafa (Réciprocité diplomatique), toy ny hoe samy Filoham-pirenena ihany no mifampiresaka, rehefa mitaky Visa ho an'ny Malagasy mandeha any aminy ny firenena iray, dia takiana Visa ihany koa ny tera-tany any aminy mandeha aty Madagasikara.
1- Varotra, tsena iraisam-pirenena, teknolojia
Ny ambasady, na ny consulat Madagascar any ivelany izany dia hitodika amin'ny fifandraisana ara-barotra sy fikarohana teknolojia.
Fitaovana eo ampelan-tanan'ny Mpandraharaha Malagasy mpamokatra sy indostria izany ny ambasady. Ka izy no hitady tsenam-barotra any ivelany, izy no hikaroka izay fitaovana sy teknolojia ilaina entina amokarana eto Madagasikara. Intelligence économique, industrielle et technologique, na sampam-pitsikolovana sy fikaroham-baovao momba ny ara-toekarena, indostrialy ary teknolojika.
Misy izany ireo mpianatra Malagasy ho tohanana manokana omena famatsiam-bola hianatra amin'ireny sekoly ambony indostrialy sy teknolojika ireny. Ny Oniversité Malagasy no hitantana ny filana amin'izany.
Ny varotra dia hitodika bebe kokoa any Atsinanana, ary ny resaka fitanterana anabakabaka, dia hitodika manokana amin'ny tany Arabo, noho ny fahamoran'ny solika, satria 60% ny fandaniana ataon'ny fiaramanidina dia solika avokoa. Izany hoe anaovana Hub ny faritra arabo, toa an'i Arabie saoudite, Dubaï.
2- Fitaterana anabakabaka sy an-dranomasina
Esorina ny haba amin'ny vidin'ny saran-dalana fiaramanidina sy an-dranomasina, ka hihena 40% avy hatrany ny saran-dalana.
Ho fehezina ara-barotra sy ara-tafika ny habakabaka sy ny ranomasim-be indianina ary ny canal de Madagascar (Canal de Mozambique).
Izany no natao mba hanamora ny fivezivezen'ny Mpandraharaha Malagasy izay misera sy mivarotra.
Haverina tanteraka amin'ny Air Madagascar ny sehatry ny sidina iraisam-pirenena sy ny eto anatiny. Tohanana manokana arak'izany izy, ho sangany aty amin'ny ilabolatany atsimon'izao tontolo izao.
Asiana fiaraha-miasa manokana amin'ireo Firenana manodidina ny fitaterana an-dranomasina aty amin'ny ranomasim-be indianina sy ny canal de Madagascar (Canal de Mozambique).
3- Foanana ny haba amin'ny entana manokana sy famokarana
Esorina avokoa ny haba amin'ny entana, akora sy fitaovana entina mamokatra. Toy ny machine industrielle, voiture utilitaire, voiture transport en commun, tracteur, ordinateur professionnel, matériel professionnel...
Tsy misy vola aloa intsony na fisavana amin'ny douane eo amin'ny seranam-piaramanidina amin'ireny entana effet personnel ireny. Resaka fiarovana ny fandriam-pahalemena, ady amin'ny basy, rongony, terrorisme no asa atao, fa tsy ny fanelingelenana ny mpandeha sy ny mpandraharaha.
Ampiasaina arak'izany ny service de renseignement, ny scanner. Caméra de surveillance.
Ho saziana mafy ireo tratra manao kolikoly.
4- Ambassade - Consulat
Apetraka ny Consulat mba hiasa tokoa ho an'ny teratany Malagasy na vahiny mila izany, hisahana ny soram-pihankohonana rehetra, fahaterahana, fahafatesana, mariazy, pasiporo...
Tsy natao ho lasa fanaovan'olom-bitsy bizina ny ambasady na ny consulat, ho faizina mafy ireo manao kolikoly, na manodina ny lalam-barotra tokony ho an'ny maro nefa lasa izy mianakavy hatrany no migoaka ny tombon-tsoa amin'izany.
Apetraka ny mangarahara amin'ny alalan'ny site internet.
Tsy maintsy misy ny fahafahana mifanerasera amin'ny ambasady na Consulat, mail, téléphone.
Vatsiana fitaovana ara-dalana ny ambasady sy Consulat rehetra. Sokafana ny ambasady na consulat amin'ny Firenena ilaina fifandraisana ara-barotra na teknolojika.
Soloina teratany Malagasy avokoa ny Ambassadeur sy Consul maneran-tany. Tsy fanaovana business ho an'olon-tokana izy ireny.
Omena Zo hifidy ny teran-tany Malagasy rehetra maneran-tany.
Ireo Diaspora mananana traikefa rehetra dia antsoina hanatevina ireo manam-pahaizana na ireo mpandraharaha mipetraka eto Madagasikara.
Atsangana ny Banque de la Diaspora Malagasy, ka afaka mampiasa vola ao ireo Malagasy mipetraka any ivelany, ka ny zana-bolany na ny tombom-barotra azony no omeny ny fianakaviany na anorenana fotodrafitrasa, trano, indostria, orin'asa aty Madagasikara.
Eo amin'ny 600 millions d'euro eo amin'izao ny vola alefan'ireo Malagasy aty Madagasikara amin'ny alalan'ny Western Union ireny, in-telo avo heny noho ny omen'ireo lazaina fa mpamatsy vola iraisam-pirenena, nefa tsy hita ny fiantraikany eo amin'ny toe-karena.
Ireo tera-tany Malagasy, noho ny antony samihafa, te hody nefa tsy manana ny enti-manana amin'izany dia hisy fitaterana faobe ho atao. Afaka miditra Service National avy hatrany izy ireny rehefa tonga eto an-toerana.
Omena fizakan-tena maha Malagasy, Nationalité Malagasy, ireo rehetra nipetraka sy taranaka nipetraka teto Madagasikara talohan'ny 1960 rehetra. Mizaka izany Zo maha Malagasy izany ihany koa ireo rehetra teraka teto Madagasikara (Droit de sang, Droit du sol). Tsy maintsy mifandray sy manaraka kosa ny fombam-piarahamonina Malagasy izy ireny. Tsy ekena ny communautarisme.
Tsy amidy amin'ny vahiny ny Tany, tsy ekena ny bail emphytéotique na ireny fampanofana tany maharitra 20-99 taona ireny, hiverenana avokoa ireny fifanarahana rehetra ireny, tsy maintsy miara-miasa amin'ny Malagasy izay te hampiasa ny Tany ka ny Malagasy no mifanaraka amin'ny tompon-tany.
Averina amin'ny Malagasy avokoa ny tany lasan'ny Colon teo aloha.
8- Iles Malagasy
An'ny Malagasy ny Iles Malagasy bodoan'ny Frantsay, alaina izy ireny, hosokafana ny resaka diplomatika miaraka amin'ny ONU, Frantsay, Amerikanina, Sinoa, Rosianina momba ny famerenana ireo tanintsika ireo.
Hiatrana kosa anefa miaraka amin'izany ny Tafika Malagasy, miaraka amin'ireo Fiaramanidina haingam-pandeha sy sambo mpiady, izay efa tafiditra anatin'ny tetikasa ho an'ny Tafika Malagasy.
9- Relation bilatérale et multilatérale
Fifandraisana multilatérale na fifandraisana amin'ny Firenena maro mitambatra, na fikambanana iraisam-pirenena.
Apetraka hatrany ilay tanjona Fahaleovantenam-pirenena sy Fiandrihanam-pirenena.
Foanana ny politikan'ataka, tsy azon'ny firenen-kafa tsabahana na vatsiana vola ny Andrimpanjakana rehetra. Tsy ekena intsony izany ny famatsiam-bola iraisam-pirenena ho an'ny fifidianana, na ho an'ny HCC, na ho an'ny Fitsarana.
Raharaham-pirenena ireny, ny Malagasy ny miantoka azy.
Hialana izay vondrona tsy hitondra vokatsoa ara-barotra sy ara-teknolojika, nefa hitsabaka amin'ny raharaham-pirenena Malagasy.
Teny Malagasy avokoa no hifandraisana amin'ireo Firenena vahiny, na izy mianatra ny tenintsika, na samy mitondra mpandika teny.